Akita inu, imbwa yakakosha chaizvo Imbwa Nyika
Akita inu, imbwa yakakosha chaizvo
Monica Sanchez | | Imbwa dzinobereka
Iyo Akita inu ndeimwe yeiyo imbwa dzinobereka iyo nekungoiona chete kunoita kuti udanane. Iine chitarisiko chinotapira kwazvo, uye jasi rakakora zvekuti unoda kuibata kakawanda. Nekudaro, imhuka yakasarudzika inogona kufara chete kana mhuri ichida kupa nguva yese yainoda. Chichava chako here?
Ndinokukurudzira kuti tsvaga mune ino inokosha kuti tinotsaurire kune imwe yemarudzi akare pasi rose.
1 Kubva uye nhoroondo
2 mumuviri zvinhu
3 Maitiro uye hunhu
5 Ndeupi musiyano uripo pakati peShiba Inu neAkita Inu?
6 Akita inu anodhura zvakadii?
7 Hachiko, akavimbika kwazvo Akita inu
Kubva uye nhoroondo
Mufananidzo - Wikimedia / B @ rt
Iyo Akita inu rudzi uye inopfuura makore 3000 yenhoroondo. Pakutanga kubva kuJapan, yaishandiswa sembwa yekuvhima imbwa (inonzi Matagi-inu), imbwa yehondo (Kurae-inu), uye imbwa yehutongi (Odate-inu). Asi kubva ku1603 vanhu vaida kuishandisa sembwa iri kurwa, saka vakaiyambuka pamwe neTosa Inu kana Chirungu Mastiff, izvo zvakaisa panjodzi yakachena Akita imi.
Neraki muna 1908 kurwa kwembwa kwakarambidzwa uye rudzi rwacho rwakakwanisa kupora, kunyanya kubva muna 1927 apo mukuru weOdate akagadzira »Akita inu Preservation Society».
Nhasi inoonekwa sembwa yenyika yenyika yeJapanYakato sarudzwa National Monument muna 1931. Zvinosuruvarisa, zvakare muHondo Yenyika II yaifanira kupfuura nenguva yakaipa kwazvo: ganda raishandiswa kugadzira mbatya dzemauto, uye nyama ikava chikafu. Avo vaida maAkita, vakakwanisa kutora mienzaniso kumamisha nemataundi madiki, uko kwavainyepedzera kuva navo sembwa dzinorinda. Vamwe vavo vakapindirana neGerman Mufudzi.
Mushure mehondo, vakadzi vazhinji vakatengeswa kuNorth America, iyo yakamutsa rudzi rutsva: iyo American Akita, yaive nehunhu hwakajairika hweGerman Mufudzi uye Mastiff. Nekudaro, neavo vakasara muJapan vakwanisa kubvisa hunhu hwekune dzimwe nyika, vachidzorera iyo Akita inu kuberekesa kune runako rwayo.
Imhuka hombe uye yakasimba. Hume inorema 34 kusvika 53kg uye mukadzi 30 kusvika 49kg, uye ivo vari 64 kusvika 71cm kureba, mukadzi ari mupfupi pane murume. Muviri wayo wakasimba, wakafukidzwa nejasi rakapetwa kaviri rebvudzi, remukati rakapfava, uye rekunze rakaomarara uye rakapfupika nerutsvuku, sesame, brindle kana chena chaiyo.
Hukuru hwemusoro wayo hwakaenzana nemuviri. Nzeve dzadzo idiki, dzakatenderera uye dzakabatwa dzakatwasuka uye dzakatsvedzerera zvishoma mberi Mhino inowanzo kuve nhema, semeso. Makumbo ayo akavezwa, izvo zvinoita kuti ikwanise kushambira pasina kunetseka.
Ane hupenyu hunotarisirwa hwe 10 makore.
Maitiro uye hunhu
Zvisinei nezvingaite senge imbwa yakadzikama, yakachengetwa, uye ine mwoyo murefu, kuti iwe unzwe zvakanyanya kusungirirwa kune vako vanokuchengeta. Mukuwedzera, chero bedzi achibatwa neruremekedzo uye rudo, ndizvo zvichave izvo zvaanoratidza kune vamwe. Ehe, inofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti ine yakasimba kwazvo simba rekudzivirira kumhuri nezvinhu zvayo, asi hazvizokonzere matambudziko kana ikadzidziswa kubva kumbwanana.
Iwe zvakare unofanirwa kuziva kuti haina kuhukura kana chisiri chikonzero chakanaka, saka kana furry yedu ikazviita isu tichafanirwa kuzviteerera.
Chii chekudyisa Akita inu? Sezvo isu tiri kutaura nezve imbwa iyo yakakosha kutora kunze kunorovedza mazuva ese kuti igadzikane uye, kunyanya, kuti ifare, Inokurudzirwa zvakanyanya kuti ipe yakaoma chikafu ine yakakwira yezvinyorwa zvemhuka protein.
Kuwanda kwacho kunoenderana zvishoma nembwa yako. Iwe unofanirwa kuziva kuti kune imbwa dzinoda kudya katatu pazuva, kune dzimwe idzo mbiri, uye kune vamwe vanongodya kamwe chete. Kana iwe ukaona kuti yako furry inogutsikana nekudya kaviri pazuva, uye iwe ukasamuona achitsvaga chikafu iyo yasara nguva, saka zvingangoita kuti iwe haufanire kumupa yakawanda.
Ehezve, kana, kune rumwe rutivi, iwe ukaona kuti akasara aine nzara, usazeze kumupa chimwe chikafu. Asi zvakare tarisa huremu hwake, nekuti kana akatora mamwe makirogiramu hazvingamunakire iye nekuti zvinogona kukonzera matambudziko ehutano akadai seshuga kana neBP.
Iyo furhu yemhuka iyi ndeimwe yemitezo yemuviri inozowana yakasviba zvakanyanya, uye nekudaro, yakawanda ichafanirwa kucheneswa. Kamwe pamwedzi mupe bhavhu rakanaka uchishandisa mvura inodziya uye shampoo yeimbwa. Kana iye achitya kwazvo mvura, iwe unogona kumuchengeta akachena nesipo yakaoma, nekuti hauzodi kumugezesa.
Saizvozvowo, zvakakosha kumubrasha zuva nezuva. Kune izvi pane yakakurudzirwa brashi inonzi Furminator. Izvi zvinobudirira zvekuti inokwanisa kubvisa kwakatenderedza 90% yebvudzi rakafa.
Kana isu tikataura nezve maziso avo nenzeve, iwe unofanirwa kuzvitarisa nguva nenguva, uye uzvichenese nezvinhu zvakakosha izvo chiremba wako wemhuka anogona kukutengesera.
Iyo imbwa yakadzikama, asi isu hatisi kuzokunyengedza: senge chero imbwa yakanaka inokoshesa munyu wayo, kana ikasabuda kuenda kunorovedza inozoratidza yakanyanya… inopandukira. Kuti, Tora uende nayo kufamba zuva nezuva, uye kana iwe uri mumhanyi, tora mukana uye utore pamwe newe kumhanya.
Iyo Akita inu imbwa inonakidzwa noutano hwakanaka, asi sezvainokwegura iwe ungatambura ne gastric torsion, kana hudyu dysplasia. Nekudaro, ichi chinhu chinogona kuwanikwa nekukurumidza kana imbwa ichiendeswa kukiriniki yezvipatara kana chipatara kunoongororwa kwehunyanzvi gore rega.
Zviripachena, kana iwe usiri kuda kuti ave nevechidiki, zvinokurudzirwa zvikuru kumutora kuti asaite neutering.
Ndeupi musiyano uripo pakati peShiba Inu neAkita Inu?
Ose ari maviri marudzi anotaridzika zvakafanana, asi hapana mubvunzo mutsauko mukuru kukura kwayo: nepo Shiba Inu achirema pakati pe8 ne15kg, uye zviyero pakati pe35 uye 40 masentimita kubva kumucheto wemhino kusvika kumuswe, protagonist yedu inorema pakati pe35 uye 55kg uye zviyero pakati pe60 uye 70 masentimita.
Imwezve tsananguro yakakosha pakusarudza rumwe rudzi kana imwe ndeyekuti, zvingave sei neimwe nzira, hunhu. VaShiba Inu, kunyangwe ivo vakaoma kuchinja, vanojairana zvirinani pane iyo Akita Inu kwavari.
Kugumisira asi kusiri kupedzisira, tarisiro yeupenyu yeimwe uye imwe yacho inochinja. Iyo Shiba Inu inogona kurarama pakati pemakore gumi nemaviri negumi nemashanu, asi iyo Akita Inu iri pakati pemakore gumi negumi nemaviri.
Akita inu anodhura zvakadii?
Kana iwe wafunga kutenga mbwanana, iwe unofanirwa kugara uchifunga kuti zvakanyanya kana zvishoma mutengo uri pamusoro 1000 euros.
Hachiko, akavimbika kwazvo Akita inu
Zvisaririra zvakasarudzika zveHachiko zvinoratidzwa kuTokyo Museum yeMasikirwo neSainzi.
Mufananidzo - Wikimedia / Momotarou2012
Unoziva here nyaya yaHachiko? Mhuka yakanaka iyi, iyo yakazvarwa munaOdate munaNovember 10, 1923 ndokufira muTokyo musi waKurume 8, 1935, achayeukwa nekuvimbika kwaakaratidza kumuchengeti wake Hidesaburo Ueno, aive purofesa muDhipatimendi Rezvekurima paUniversity yeTokyo.
Sezvo Ueno akazviwana, Hachiko akamuperekedza mazuva ese kuchiteshi cheShibuya, ndokugara ipapo, vakamumirira kusvikira zuva rake rebasa rapera. Asi musi waMay 21, 1925, muzvinafundo haana kudzoka. Akange atambura kusungwa kwemoyo achidzidzisa, uye ndokufa.
Imbwa Haana kutama kubva kuchiteshi chechitima kwemakore 9 anotevera ehupenyu hwake, panguva yaakadyiswa nekuchengetwa nevanhu vaive vaona rudo rwaainzwa kumunhu wake.
Rimwe gore asati afa, muna Kubvumbi 1934, chifananidzo chakamiswa pachiteshi mukuremekedza Hachiko, aivepo. Nhasi, Ose Kurume 8 anoyeukwa pachiteshi ichocho.
Pakupedzisira, tinonamatira akateedzana emifananidzo yakanaka kuti iwe unakirwe:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa dzinobereka » Akita inu, imbwa yakakosha chaizvo
Zvese zvembwa yako
Chengeta imbwa yako sekuchengeta kwainoita iwe nemazano aya atinoita.
Tamaskan, imbwa ine muviri wemhumhi
Ndeapi marudzi eembwa diki?
Tora zvinyorwa zvazvino imbwa.